Izinto Zamahhala Zokwenza Izinqolobane - IntoKildare
Izinto Zamahhala Ongazenza
Ngeke ukhokhe lutho ukuvakashela izindawo eziningi ezikhangayo zikaKildare. Iningi labo likhululekile ukungena, futhi kunenqwaba yemicimbi yamahhala nokuhlangenwe nakho ongakujabulela nakho. Hlola izinqaba, iminyuziyamu, imidwebo yobuciko nokuningi, konke mahhala, ngosuku olungeke lukushiye ephaketheni. Kuphezu kwethu!
Bheka okunye kokuheha kwamahhala okuvakashelwa kakhulu eKildare, ukuthola izinto eziningi ongazenza ngaphandle kokwephula ibhange. Kusukela ezindaweni zamagugu, kuya emapulazini ezifuywayo, eziqiwini kanye neminyuziyamu yezemfashini, ngokuqinisekile kuzoba nokuthile kuwo wonke umuntu.
Jabulela ukuhamba ntambama, usuku lokuphumula noma ngisho neholide lokuphumula elihlola umfula omuhle kunawo wonke e-Ireland, ngokuthile okuthakazelisa ngayo yonke indawo kule towpath eneminyaka engama-200 ubudala.
Cishe indawo endala kakhulu futhi ebanzi kunazo zonke yotshani obuyisisekelo semvelo eYurophu kanye nendawo yefilimu ethi 'Braveheart', iyindawo yokuhamba edumile yabantu bendawo kanye nezivakashi ngokufanayo.
IGran Canal Way
IGrand Canal Way ilandela imikhondo yotshani emnandi nemigwaqo eseceleni kwetiyela kuze kuyofika eShannon Harbour.
Umkhosi kaJuni Fest uletha eNewbridge okuhle kakhulu kwezobuciko, Itiyetha, Umculo nokuzijabulisa komndeni.
Igalari ye-Kilcock Art
Igalari kaNdunankulu kaKildare kusukela ngo-1978, ikhombisa imisebenzi yobuciko yabaningi bama-Irelands asungule abaculi.
Umzila weKildare Derby Legends
Hamba 'uhambo' lweDerby ngaphezu kwamastadiyu ayi-12, kulandela izinkomba zezinganekwane zomjaho wamahhashi odumile wase-Ireland, i-Irish Derby.
Ibanga elifushane nje ngaphandle kweRathangan Village kunenye yezimfihlo ezigcinwe kahle kakhulu zase-Ireland zemvelo!
Ukuma emnyango weMaynooth University, incithakalo yekhulu le-12, kwake kwaba yisiphephelo nendawo yokuhlala eyinhloko ye-Earl yaseKildare.
UMore Moore Abbey Wood
Ihlathi elixubekile elinenketho yemizila yokuhamba esizeni sesigodlo sekhulu lesi-5 elasungulwa iSt Evin futhi lingaphansi kwe-1km ukusuka eMonasterevin.
I-Naas Trail Yomlando
Yiba ne-ramble ezungeze i-Historic Trails yaseNaas bese uvula amagugu afihliwe okungenzeka ubungazi ngawo edolobheni laseNaas Co. Kildare
Umzila ohamba amakhilomitha angu-167 olandela ezinyathelweni zabaqashi abangu-1,490 baphoqeleka ukuba basuke eStrokestown, badlule kwi-County Kildare eKilcock, eMaynooth naseLeixlip.
IPollardstown Fen inikeza ukuhamba okuyingqayizivele enhlabathini eyingqayizivele! Landela i-boardwalk enqamula e-fen ukuze uzwe la mahektha angama-220 we-alkaline peatland esondela.
I-St Brigid's Trail ilandela ezinyathelweni zomunye wabangcwele bethu esibathandayo kakhulu edolobheni laseKildare futhi ibheka le ndlela eyinganekwane ukuthola ifa likaSt Brigid.